Netflix က၏ BUSTED Season3ကို 22 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်! - 빵야뉴스
승인 2021.01.25 17:51
[BBANGYA News | Reporter Mo Mo] Netflix ၏ ကိုရီးယား ပထမဆုံး မူရင်း စီးရီးနှင့် ပထမဆုံးဖျော်ဖြေရေးပရိုဂရမ်အဖြစ် အာရုံစိုက်ခံရသည့် BUSTED Season3၏ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ တင်ပြချက်ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်ညနေ ၃ နာရီတွင် အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၂ ရက်နေ့တွင် Netflix တွင်သာ ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
'BUSTED Season 3'! ရှာဖွေခြင်နှင့် ဖျော်ဖြေမှုနှစ်ခုလုံးတွင် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ဟာသခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အတူတကွစုစည်းပြီး ပို၍ ကြီးမားသော ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်သို့ အရောက်လှမ်းသည့် ဖျော်ဖြေရေးပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စီးရီး၏ တတိယအပိုင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀၊ မတ်လတွင် စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ တွင် ထုတ်လွှင့်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ BUSTED Season3ဟာ စီးရီး၏ နောက်ဆုံး Seasonဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် BUSTED Season3ခေါင်းစဉ်ငယ်သည် ရာဇဝတ်ကောင်အလားအလာများ၏ စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
'BUSTED Season 3'တွင် Yoo Jae-seok, Lee Gwang-soo, and Lee Seung-gi, Park Min-young, Kim Jong-min, Se-hun နှင့် Se-jeong လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များအပြင် သရုပ်ဆောင် Song Ji-hyo နှင့် အဖွဲ့ EXO မှ Suho ကဲ့သို့ ၕည့်သည်သရုပ်ဆောင်များသည် ပါဝင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ထပ်ကြည့်စရာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Netflix ၏ မူရင်းစီးရီး <BUSTED Season 3!> ကို ၂၂ ရက်တွင် Netflix တွင် ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
##BUSTED Season 3